E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-ahụ, mara, n'anya, na-enwe. E nwere dị adị n'ezie ndị na-uku na ha nwere ike ghara ebelata ka fun. Okwu "fun" "gbawara" "bọl" "party" ada enweghị isi na ọnụnọ nke na kasị ukwuu n'ime egwu dị adị n'ezie. Ụdị ìgwè okwu anyị ọṅụ e belata ka "fun" n'ihi na anyị uto buds maka N'ebube nwụrụ.
njem ekwu, "Mgbe ọ na-abịa ụkpụrụ omume, anyị niile nwere ihe ọjọọ uto. "Ee. Na mgbe ọ na-abịa Chineke anyị enweghị uto. Dị ka Njem ekwu, "Ọ bụ nkịtị maka n'anya na-amụnye mgbe anyị na-ekwurịta pop omenala, ma gbazere n'elu mgbe anyị na-ekwurịta banyere Kraịst. "The ugwu nta nke omenala di fun. The Himalayas nke Christ nāda # mbà.
Njem Lee chọrọ ka ị mata: E nwere ihe karịrị ugwu nta. Ọbụna n'ihi na ndị na-akatabeghị e nwere ihe ọzọ. Akwụkwọ a e dere maka ndị na-eto eto. Na e dere iji nye olileanya na ndị na-eche na ha nwere obere ka na-eme. Na e dere na obi ike na mgbe a na-eto eto na-ahụ ebube Chineke ihe gbanwere. ha na-ebili!
Ma akwụkwọ bụ tozuru okè. Ọ ji ma ụmụ tozuru okè. Ọ ikpono afọ. Njem maara ihe na-apụghị afọ. ọ na-ahụ…
Nke a bụ Njem okwu site na ERLC Summit on the Gospel na nke agbụrụ ná mma. N'okpuru ebe a bụ ihe odide site na ozi. na mgbede a, M na a jụrụ ikwu okwu banyere Millennials na nke agbụrụ ná mma ....
Na Njem ọhụrụ akwụkwọ, ebili, ọ gbalịrị dee banyere ihe ndị na-mkpa ka ọgbọ a. Ekiri ka ọ na-ejegharị site na ụfọdụ nke isiakwụkwọ na-enye a sinik ọgụgụ kasị elu na ...
"Njem e dere ede a akwụkwọ na m na-eche ọ bụla na-eto eto kwesịrị ịgụ. Ya ahuhu n'ihi na Jizọs na ọgbọ a na-abịa site lewe gị anya na bụla na peeji nke. M ike na-eche ịhụ ...
Njem ọhụrụ akwụkwọ, ebili, bụ now! -Agụ John Piper si Okwu mmalite nke akwụkwọ n'okpuru. I nwere ike tupu iji akwụkwọ na chọpụta ihe na Risebook.tv Otu n'ime isi ihe na-amasị m banyere ...
-Ezi site Njem Lee
Na-egwu media ị ga-mkpa ma imelite nchọgharị gị na-a na-adịbeghị anya version ma ọ bụ melite gị Flash plugin.
Bilie Ndụ na Chineke Great Story